...handray antsoratra ny hevitrao.
Ny tambajotranay dia vonona ny hiara-hiasa aminao na aiza na aiza no misy anao. Tsy nataon’ny Mpanoratra Fahatsiarovana ho sakana ny faritany. Na eo aza izany dia ny hanome fahafampo tanteraka ny Mpanoratra izay safidinao.
Ny hisian’ny fahatokisana eo amin’ny mpitantara sy ny mpanoratra dia zavatra lehibe aminay. Rehefa mitantara ianao dia ny fomba fitantaranao no arahina. Hametraka fanontaniana vitsy eny ny mpanoratra mba ahafahany mamadika ny feo ho soratra : zavatra niseo teo amin’ny fiainana, ny nahatsikaiky, ny nampihomehy...Ho raisina eo avokoa ny fihetsikao. Ilaina tokoa izany mba ho teny mahaliana ny mpamaky ny ho voasoratra ao anaty boky.
Ho hajaina avokoa ny tsiambaratelonao.Raha sendra tsikaritry ny Mpanoratra ny fahasahirananao mitantara nohon’ny alahelo dia afaka manampy anao avy hatrany izy manintsy araky ny izy ny teny tokony avoaka (tsy hanalana baraka olona).
Mila fahaizamanao ny fanoratana ny teny marina sy tsara. Izay no antony hizaran’ny Mpanoratra Tantarampiainana erantany hevitra sy fomba fiasa. Na dia samy manoratra amin’ny fiteniny aza dia mirindra avy hatrany ny fizarana. Ny internet no fitaovana fampiasanay rehefa hihaona izahay.
Ny Mpanoratra Tantarampiainana dia tsy mamerina indroa ny fomba fiasa. Ny antony dia tsotra : samy hafa avokoa ny tantaran’ny tsirairay hany ka tsy hitovy ny fomba hanoratana ny boky. Ny fifandraisanay erakin’izao tontolo izao dia manome toky fa saina mivoatra no hoetinay hiara miasa aminao ary vonona ny hihaino ny hevitrao hananganana ny bokinao.